Faha 200 Taona LMS, 50 Taona FJKM
Notontosaina tany Antsiranana ny 18-20 aogositra 2017 ny fanokafana ny fankalazana ny faha200 taona nidiran'ny LMS teto Madagasikara sy ny faha 50 taona ny FJKM. Vahoaka kristianina an'aliny maro no tonga nanatrika izany tany an-toerana.
Naresaka ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-6 nanomboka ny voalohandoahan'ny volana aogositra 2017 lasa teo. Nirohotra namonjy an'Antsiranana ny fiarakodia maro na an'olon-tsotra izany na mpitatitra olona, tao koa ireo nofaina manokana. Hiatrika ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny faha 200 taonan'ny nidiran'ny LMS teto amintsika sy ny faha 50 taonan'ny FJKM no tanjona. Tsy diso anjara tamin'ny fanatrehana izany ny mpitandrina RAZAFINDRAMANITRA Vololoniaina. Nanana solontena niatrika izany koa isika teto amin'ny FJKM Ambalavao Isotry na dia tsy nisy fandaminana manokana momba izany aza. Samy nanao izay hahatongavany tany an-toerana ny rehetra, avy eo vao nifanatona.
Tsy nandiso fanantenana izay rehetra tonga tany ireo fandaharana rehetra notanterahina, toy ny recyclage ho an'ny mpitandrina, ny fitsangatsanganana tany Ramena sy ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena natao tany, ary indrindra ny filaharam-be nanomboka teo amin'ny Gymnase Couvert hatrany amin'ny kianja fanaovam-baolina izay nanaovana ny fanompoam-pivavahana fanokafana.
Tonga nanatrika izany fanompoam-pivavahana lehibe izany sy nandalo tany Ramena ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA ary nandray anjara fitenenana nandritra ny kabary fanokafana ny fankalazana.
Ny nampalahelo dia nisy ireo tsy nanam-po ny ampahan-dalana ratsy teo anelanelan'Ambilobe sy Antsiranana ka somary tara kely. Nisy ireo tonga tany ihany saingy tara satria ny Tafika Masina hotontosaina tao Anivorano Avaratra (18Km miala an'Antsiranana) no tena nimasoany.
Tsara ny miomana dieny izao: Any Toamasina no hitohy ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny FJKM sy ny faha 200 taona nidiran'ny LMS ny 17-19 aogositra 2018. Manantena isika fa ho maro no hisolo tena ny FJKM Ambalavao Isotry.
Crée le mercredi 28 mars 2018 à 18:37:11
Fankalazana faha-20 taona ny fiaraha-miasa amin'ny Mpitandrina
Novambra 1995, novambra 2017, feno 20 taona katroka ny fiaraha-miasa ny Mpitandrina RAZAFINDRAMANITRA Vololoniaina mianakavy sy ny[. . .]
Ny alahady 12 novambra 2017, tamin\_'ny 9ora maraina, no nankalazaina teto amin\_'ny FJKM Ambalavao Isotry ny fankalazana telo soson[. . .]